GV Mpisolovava · Janoary, 2011 · Global Voices teny Malagasy
Tantara mikasika ny GV Mpisolovava tamin'ny Janoary, 2011
Nanaraka an'ireo fnoherana midongizina ao Tonizia tato anatin'ny andro vitsivitsy sy ny fitokonana faobe mananontanona ny ampitso, nikabary tao amin'ny fahitalavi-panjakana Tunisie7 , ny Filoha Toniziana Ben Ali io hariva io ary feno fileferana betsaka tsy toy ny mahazatra. Isan'ireo teboka maro hafa ny filazàny fa tsy mikatsaka ny ho...
Iràna12 Janoary 2011
Tonizia : Voasambotra androany i Slim Amamou, mpitoraka bilaogy, mpiara-miasa amin'ny Global Voices
Tonizia09 Janoary 2011
Voasambotra androany 6 Janoary teo amin'ny manodidina ny 1 ora tolakandro teo ilay mafàna fo sy mpitoraka bilaogy Slim Amamou. Amin'izao fotoana izao, tsy naharay vaovao mikasika azy ny namany sy mpiara-miasa aminy, ary mbola tsy fantatra ny tohin'ity fisamborana azy ity. Tokony nandeha niasa izy taorian'ny namitàny ny fijerena...
Mametraka sivana amin'ny fanaovana gazety i Hongria
Eoropa Afovoany & Atsinanana02 Janoary 2011
Efa zava-mahazatra any amin'ny faritra maro ny sivana atao amin'ny fampahalalam-baovao, saingy tsy nisy nisaina mihitsy hoe firenena iray ao afovoan'i Eraopa no handeha hizotra amin'izany làlana izany. Eny, te-hanova an'izany i Hongria.